ပင်မစာမျက်နှာ United Kingdom ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးကစားသမားများ Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB "အကောင်းဆုံးအမည်ပြောင်နှင့်အတူလူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်Sakinho"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသင်သည်ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။
အဆိုပါအသက်တာနှင့် Bukayo Saka ၏ထ။ ခရက်ဒစ်မှ TheSun နှင့် Nettheroy
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုအကြီးအဘောလုံးအလားအလာနဲ့ကလေး-မျက်နှာရှာဖွေနေတောင်ပံကစားသမားအဖြစ်သူ့ကိုမြင်သည်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သော Bukayo Saka ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
Bukayo Saka ပုရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် လန်ဒန်မြို့, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်နိုင်ဂျီးရီးယားမိဘများထံသို့စက်တင်ဘာလ5၏ 2001th နေ့ဖြစ်၏။ သူ့မိဘကသူပိုကောင်းလူနေမှုနှင့်၎င်းတို့၏မွေးသေးသောသားသမီးတို့အဘို့ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရေးအတွက်လန်ဒန်မှာအခြေချရန်နိုင်ဂျီးရီးယား left မွေးခင်တဲ့သူနိုင်ဂျီးရီးယားရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသည်။
မိမိဘွားတို့အပေါ်မှာ, သူ့မိဘများ "အမည်ရှိBukayo"အရာကိုဆိုလိုသည်တဲ့ unisex name ကိုက""ပျော်ရွှင်မှုကထပ်ပြောသည်။ Bukayo မကြာခဏအသုံးပြုသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် အနောက်တောင်နိုင်ဂျီးရီးယား၏ရုဘာအနွယ်အားဖြင့်။ ဒါဟာဆိုလိုခြင်းဖြင့် Busayo Saka နိုင်ဂျီးရီးယား၏ရိုရုတိုင်းရင်းသားအုပ်စုတစုကနေသူ့မိသားစုကိုဇာစ်မြစ်ရှိကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။
Saka တစ်ဦးအောက်ပိုင်း-လူလတ်တန်းစားမိသားစုနောက်ခံလန်ဒန်မြို့ဗြိတိန်မြို့တော်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်နှင့်မိခင်အဘယ်သူသည်အများဆုံးနိုင်ဂျီးရီးယားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ အကောင်းဆုံးကိုဘဏ္ဍာရေးပညာရေးရှိပေမယ့် menial အလုပ်အကိုင်များပြုမကြာခဏကြိမ်မိသားစုကိုဂရုစိုက်ဖို့ Moni နှင့်အတူရုန်းကန်ဗြိတိန်နှင့်နောက်ကျောနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်နှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်ပါတယ်ခဲ့ပါဘူး။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပညာရေး & အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup
ရုံလန်ဒန်မြို့တွင်အများဆုံးနိုင်ဂျီးရီးယားကဲ့သို့ Bukayo Saka ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဘောလုံးအကြောင်းကိုအသည်းအသန်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာဘောလုံးနှင့် Bukayo လန်ဒန်မြို့ရှိဘောလုံးကွင်းပညာရေးရှိခြင်း၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ဦးဆောင်ကြောင်းလူနေမှုသူတို့ရဲ့စံတင်ပေးဖို့ရန်သှငျး ထား. အလိုဆန္ဒအဘို့မိမိတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခဲ့သည်။
Hအာဆင်နယ်အသင်းကိုထောက်ပံ့တဲ့သူဘောလုံး-မေတ္တာရှင်မိဘများ aving ကကလပ်အကယ်ဒမီကအောင်အပေါ်သူ၏စိတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်ငယ်ရွယ် Bukayo များအတွက်သဘာဝကသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအောင်မြင်တဲ့အကယ်ဒမီရုံးတင်စစ်ဆေး secure အားမိမိရှာပုံတော်အတွက် grounded နှင့်နှိမ့်ချနေသူ့သားသေချာစေရန်ဝါးတာဝန်ယူသူကို Bukayo Saka ရဲ့အဖေဖြစ်ခဲ့သည်။ Bukayo ၏စကားများတွင်;
'' ငါ့အဖေငါ့အဘို့အကြီးအကျယ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ်အခါ မှစ. သူအမြဲငါ့ကိုစောင့်ဘဲ '' grounded
အာဆင်နယ်ဘောလုံးအကယ်ဒမီအတွက်လျှောက်လွှာအမှန်တကယ်ထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအဘို့ကိုသာမရရှိနိုင်ခဲ့။ သူ့မိဘ Bukayo ကကြာသောအရာကိုရှိခဲ့ပါတယ်သိလို့, သူတို့ကလျှောက်ထားရန်တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိပေ။ ကျေးဇူးတင်စရာအာဆင်နယ်အကယ်ဒမီကိုခေါ်သူကသူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေဖြတ်သန်းသည်, မိမိတန်ဖိုးရှိသက်သေပြခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်, သူ့မိဘများနှင့်မိသားစုဝင်များ၏မာနကိုအဘယ်သူမျှမဘောငျသိတယ်။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
Saka နဲ့သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင် လက်နက်တိုက်'' s ကို Hale ကအဆုံးအကယ်ဒမီကသူ့ကိုနှင့်သူ၏မိဘများနှစ်ဦးစလုံးထံမှပူဇော်သောယဇ်ကိုစာရေးတံနှင့်ပြည့်စုံလေ၏အဖြစ်မလွယ်ကူခဲ့ဘူး။ သူ၏စကားခုနှစ်တွင်;
"ဒါဟာငါ့ကိုဒီနေရာမှာ get ကူညီဖို့ငါ့မိဘများအတွက်အတော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အားလုံးပေးခဲ့တယ်နှင့်သင်တန်းများသို့ငါ့ကိုတယ်"
ဤသည်ရုန်းကန်ခက်ခဲစျခြိနျလုံးအလုပ်လုပ်မိမိကအကောင်းဆုံးကိုပေးတော်မူ၏သေချာစေရန်သူ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည့်လှုံ့ဆျောမှုအများကြီးနှင့်အတူ Saka ဖြစ်သည်။ ရုံကသူ၏အသင်းဖော်များကဲ့သို့ Saka ရုပ်တုကိုခူး။ အခြားသူတွေနှငျ့အတူကွှနေစဉ် သီယာရီအွန်နရီ, Dennis Bergkampစသည်တို့ကိုသူပြီးသားကလပ်မှာလူငယ်နည်းပြခဲ့ဖူးသူကယခင်ဆွီဒင်နှင့်အာဆင်နယ်ဒဏ္ဍာရီ, Freddie Ljungberg ခူး။
Freddie Ljungberg သူကိုယနေ့ကဘာလဲဆိုတာဖြစ်လာဖို့ Bukayo Saka ကူညီပေးခဲ့သည်။ image ကို Credit- Football365
တစ်ဦး U15 အကယ်ဒမီကစားသမားအဖြစ်, Freddie Ljungberg Bukayo Saka အကြံဉာဏ်ကိုအကောင်းဆုံးအပိုင်းအစကိုပေး၏။ သူ Saka နှိမ့်ချအမြဲတည်ရန်နှင့်သူငယ်ကောင်လေးကမျှကာလ၌ထိပ်တန်းကစားသမားဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်အဖြစ်အပိုခက်လုပ်ကိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှလမ်း
Freddie Ljungberg သူ့ကိုအကြောင်းကိုခန့်မှန်းအရာအားလုံးလေ၏။ Saka 17 နှစ်ရှိပြီလှည့်သကဲ့သို့, သူသည်အာဆင်နယ်အသင်းကပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ပေးထားနှင့်အောက်တွင်-23 ခြမ်းမှရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အထင်ကြီးဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုစီးရီးပြီးနောက်, Saka ကိုလည်းကလပ်ရဲ့အကြီးတန်းအဖွဲ့သို့ခေါ်တော်မူခဲ့သည်။
အကြီးတန်းအဖွဲ့နှင့်အတူနေစဉ်တွင်, မိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလောင်ကျွမ်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ချွတ်တိုက်ထုတ်ရန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်ဂိမ်းအတွက်အခွင့်အလမ်းရှာတော့တယ်။ , ယှဉ်ပြိုင်မှု၏စကားပြောသောအဲလက်စ် Iwobi အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်နှင့် အာရုန်သည်ရမ်းဆေး သူ၏အပေါင်းအဘော်ကအကယ်ဒမီအိမ်ထောင်ဖက်ထက်ပိုကြီးတဲ့စိန်ခေါ်မှုပိုမိုခဲ့ Reiss နယ်လ်ဆင်။ အဆိုပါအများကြီးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောအလှညျ့အပွောငျးပထမဦးဆုံး Saka ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အထင်ကြီးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့သူ့ရဲ့အမှတ်အသား left ရှိရာ 2018 / 2019 ယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲအပေါ်မှာသက်ရောက်လေ၏။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
အဆိုပါ 2018 / 2019 ရာသီ၏အဆုံးသည်နှစ်ဦးစလုံးကိုမွငျလြှငျ အာရုန်သည်ရမ်းဆေး နှင့် အဲလက်စ် Iwobi အသီးသီး Juve နဲ့အဲဗာတန်များအတွက်အာဆင်နယ်ထွက်ခွာ။ ဤသည်လက်ဝဲ-တောင်ပံအနေအထားများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်သူ၏ကေဒါအတွက်တစ်ဦးတည်းသာလူတဦးနှင့်အတူ, Bukayo ပြောင်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသည်ဖို့အခန်းကိုပေး၏။
19 စက်တင်ဘာလတွင် 2019 Bukayo Saka သူ့ကိုနှင့် Reiss နယ်လ်ဆင်အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အစွန်းရှိခြင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ မင်းသိလား?… အာဆင်နယ် 3-0 ယူအီးအက်ဖ်အေယူရိုပါလိဂ်သူတို့ရဲ့အဖွင့်အုပ်စုတစ်စုဂိမ်းထဲမှာ Eintracht Frankfurt ဆန့်ကျင် 2019-20 အနိုင်ရအဖြစ်ထိုနေ့ရက်တွင်သူသည်သာရမှတ်ပြုသူလည်းနှစ်ခုချစ်စရာကောင်းတဲ့ကိုကူညီပေးနေသည်။ အောက်တွင်ဗီဒီယိုကသက်သေအထောက်အထားတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Bukayo Saka သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအာဆင်နယ်ရည်မှန်းချက်သွင်းယူသူ့ရဲ့ကလေးဘဝကိုအိပ်မက်မပြည့်စုံလျှင်, မိမိအဖေတစ်ဦးအမြန် FaceTime ခေါ်ဆိုမှုကိုပေး၏။ "အဆိုပါနည်းပြငါ့ကိုဂိမ်းအပြီးလျင်မြန်စွာပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်ရန်အတွက်ရေခဲရေချိုးအတွက်ရချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသူ့ကိုမှမပြောနိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှတက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မထား" သူကပြောပါတယ်။
သာမန်က start နှင့်အတူပြိုလဲသွားပြီမယ့်အစား, လက်ဝဲ-တောင်ပံကစားသမားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကနေသွား၏။ At 18 နှစ်နှင့် 125 ရှေးကာလ, Saka အာဆင်နယ်တိုက်ပွဲဖြစ် vs တစ်ဦးက Man မန်ယူစတင်ရန်ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတွင်အသက်အငယ်ဆုံးအာဆင်နယ်စီနီယာကစားသမား starter ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်နေဖြင့်ပွဲစဉ်အတွက်သူလည်းအံ့သြပရိတ်သတ်တွေ အက်ရှလေယန်း.
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, Bukayo Saka Freddie Ljungberg ပြီးနောက်အာဆင်နယ် left-တောင်ပံမျိုးဆက်မှလာမယ့်အဆင်းလှဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအဖြစ်အများဆုံးပရိတ်သတ်တွေမြင်သည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - relationship ဘဝ
အောင်မြင်သောဖြစ်ခြင်းနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံး၏အကြီးမားတောင်းဆိုချက်များမှမြင့်တက်သည် Bukayo Saka တစ်ဦး Girlfriend သို့မဟုတ်ဇနီးရှိပါတယ်လျှင်အများဆုံးပရိတ်သတ်များကိုမေးမြန်းခဲ့ကြရမည်ဟုအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့! မိမိအချစ်စရာကလေး-မျက်နှာကစားသူ၏စတိုင်ဧကန်အမှန်မိန်းကလေးတစ်ဦးရဲ့ရည်းစားအဘို့သူ့ကိုမြင့်မားတဲ့နေရာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတူဒွန်တွဲကြည့်ရှုသည်။
Bukayo Saka ရဲ့ Girlfriend သို့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ။ ခရက်ဒစ်မှ Sortitoutsi
အတော်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်ဒါဟာ Bukayo Saka (စာအရေးအသား၏အချိန်မှာ) တစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာသည်။ ကျနော်တို့ကြောင့်ထိပ်တန်းလေယာဉ်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကရဲ့ un-မှလွှတ်သဘောသဘာဝရန်, Saka သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်ထက်ရည်းစားသို့မဟုတ်သူ၏ဇနီးဖြစ်သူတစ်ဦးဦးကိုရှာဖွေနေအာရုံစိုက်ဖို့ပိုမိုနှစ်သက်ကြရပါမည်ကိုငါသိ၏။
ဒီအခိုက်မှာကျွန်တော် Saka ကသူ၏ပုဂ္ဂလိကဘဝအပေါ်မည်သည့်မီးမောင်းထိုးရှောင်ရှားရန်တစ်သတိအားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီဟုပြောနိုင်ပါ။ ဤအချက်ကိုခက်ခဲကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့တူဘလော့ဂါများသူ့မေတ္တာဘဝနှင့်ချိန်းတွေ့သမိုင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်စေသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သူဟာရည်းစားရှိအံ့သောငှါနေဆဲဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အနည်းဆုံးအားယခုပြုလုပ်အများပြည်သူစေခြင်းငှါမကြိုက်နှစ်သက်သည်။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Bukayo Saka ကိုယ်ပိုင်ဘဝကဖြစ်ရပ်မှန်များကိုသိရန်ရယူခြင်းသင်ပယ်ရှင်းဘောလုံးရေးရာမှသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောစပ်၏ပိုကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
Bukayo Saka ကိုယ်ပိုင်ဘဝကအချက်အလက်နဲ့။ တွစ်တာမှအကြွေး
သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရယူခြင်း, သင် Bukayo Saka နေထိုင်ပြီးတစ်ဦးဖွဲ့စည်းဘဝအသကျရှငျဖို့နည်းလမ်းချဉ်းကပ်သက်ဆိုင်နားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သူကပရိသတ်များတွေအများကြီးဖွင့်ရရှိသွားတဲ့သူတစ်ဦးကအရမ်းဖော်ရွေခြင်းနှင့်နှိမ့်ချ-to-မွကွေီးပျေါမှာလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ရေးအတွက်နေစဉ်, သူကအသေးစိတျ၏အသေးငယ်ဆုံးဂရုစိုကျနှင့်ဘာမျှမအခွင့်အလမ်းမှထွက်ခွာကြောင်းသေချာ။
နောက်ကျောနိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်ပင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်, Bukayo Saka ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်နိုင်ငံသားအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာကာကွယ်ထားသင့်ကြောင်းအမျိုးသားဘဏ္ဍာကိုအဖြစ်သူ့ကိုကြည့်ရှုပါ။ အောက်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါ။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မိသားစုဘဝ
Bukayo Saka သည်သူ၏မျိုးရိုးနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားအမြစ်များဂုဏ်ယူနှစ်ဦးစလုံးကောင်းမကောင်းကြိမ်၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါအဖြစ် breadwinner သူအားလုံးကျေးဇူးတင်စကားမှဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ရေးဆီသို့သူ့မိသားစုရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းကိုအတုရှိသည်ဟုဝမ်းမြောက် ဘောလုံး.
Bukayo Saka မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများ, မိမိအ mum,, အဖေ, ညီအစ်ကို, ညီအစ်မဘထွေး, အဒေါ်စသည်တို့ကို, လက်ရှိအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးရေးရာ၏ပဲ့မှာသူတို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများရိတ်နေကြသည်။ ယခုအချိန်တွင်တစ်ဦးသူ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ ll အားလုံးရှိတယ် ဆိုရှယ်မီဒီယာချိတ်ဆက်၏မြောက်မြားစွာနည်းလမ်းတွေရှိနေသော်လည်းလူထုအသိအမှတ်ပြုမှုရှာမသတိရွေးချယ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - လူနေမှုပုံစံ
ဒါကြောင့်ပိတ်အစေးများနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအပေါ်အလေ့အကျင့်အဖြစ်ဝေးကသူ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်သကဲ့သို့ Bukayo Saka နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောကမ္ဘာဖြစ်ကြသည်။ သူကအောင်ယုံကြည်နေပေမယ့် ဘောလုံးကွင်းထဲမှာပိုက်ဆံလိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူ၏ခိုင်ခံ့သောအခြေခံစစ်ဆေးမှုများ၌သူ၏ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့သူ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, Bukayo Saka တော်တော်စျေးကြီးကားများတစ် handfull အားဖြင့်အလွယ်တကူသိသာနေတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အသက်ရှင်ဖို့ခွင့်မပြုတာဖြစ်ပါတယ်, အိမ်တော်စသည်တို့ကို
Bukayo Saka လူနေမှုပုံစံ - သူသည်လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုတားဆီးပေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်
flash ကိုကားများနှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာများနှင့်စျေးကြီးလူနေမှုပြလူမှုမီဒီယာ၏ရေးသားချက်များစာရေးများ၏ခေတ်သစ်ဘောလုံးလောကမှာရှိတဲ့ကျနော်တို့ Bukayo Saka တစ်လန်းဆန်းဖယျရှားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောနိုင်တယ်။
Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - မရေမတွက်အချက်အလက်
သူကအကယ်ဒမီမှာသာနိုင်ဂျီးရီးယားမဟုတ်ခဲ့: အာဆင်နယ်အသင်းအကယ်ဒမီအစာရှောင်ခြင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနွယ်ဖွားအများအပြားကစားသမားမှနေအိမ်ဖြစ်လာနေသည်။ မကြာသေးမီကအရေးအသား၏အချိန် မှစ. , အကယ်ဒမီနိုင်ဂျီးရီးယားအမြစ်များနှင့်အတူအခွက်တဆယ်ကတိပေးမှလေးပညာသင်ဆုအပေးအယူကမ်းလှမ်းခဲ့သည် - လက်ဝဲဘက် မှစ. ညာဘက်အာသာ Okonkwo, အမ်းစထရောင်း Okoflex ဂျိမ်းစ် Olayinka နှင့် Xavier Amaechi ပါဝင်သည်။
အကယ်ဒမီမှာအခြားအနိုင်ဂျီးရီးယားကြယ်။ ခရက်ဒစ်မှ TheSunဘီဘီစီ၊ အာဆင်နယ်၊ Flickr ကို
ဘာသာတရား: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်း, သူ့ Instagram ကိုစာတန်း "ဖတ်ဘုရားသခင့ကလေး"နှင့်ဤစာတန်းကသူ၏အသင်းဖော်ဂျိုး Willock ၏ဆင်တူသည်။ ငါတို့အဘို့အ, Bukayo Saka ရဲ့ဘာသာတရားကိုခရစ်ယာန်ဘာသာသောမြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
Bukayo Saka ရဲ့ Religion- ရှင်းလင်းချက်။ IG မှအကြွေး
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bukayo Saka ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။
က Nathaniel Clyne ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Ross က Barkley ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်